कथा ‘देश’ :: नयनराज पाण्डे – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ कार्तिक २०७७, आईतवार ०५:०६ English
कथा ‘देश’ :: नयनराज पाण्डे
भागिरामले लढियाबाट बैलहरूलाई फुकाएको मात्र के थियो, उसको पाँचसात वर्षको छोरो लछानु आएर बाउको कम्मरमा झुन्डिँदै कराउन थाल्यो, “हाम्रो घरमा मुसा छ ! एउटा हैन थुप्रै छ !”
छोराको अनुहारमा अपार खुसी छ । मङ्सिरमा दाइँ सकेर खेतमा मुसा खोज्ने क्रममा भागिरामले त्यतिखेर थुप्रै मुसा समातेर घर ल्याएको थियो । अनि त्यसको चटनी बनाएर दुईतीन दिनसम्म लगातार खान पाएको थियो । अहिले चैत लागिसक्यो । बीचको चार महिना भागिरामले कतैबाट मुसा ल्याएन । अनि लछानुको जिब्रोमा मङ्सिरमा खाएको मुसाको चटनीको स्वाद आजको दिनसम्म कायमै रह्यो ।
आफ्नो छोराको कुरा सुनेर भागिराम पनि प्रशस्तै खुसी भयो । उसलाई पनि दुईचार वटा मुसा भेटिए र त्यसको चटनी खान पाए मुखको स्वाद फेरिन्थ्यो भन्ने लागेको छ । करङ्गी धानको भात र नुन–प्याज । महिनैदेखि एउटै स्वाद लिँदालिँदा उसलाई पनि दिक्क जस्तै लागिसकेको छ ।
“कहाँ छ मुसा ?” भागिरामले सोधेपछि लछानुले उसको कछाड तान्दै उसलाई बुकुराभित्र लग्यो । अनि एउटा कुनाको दुलो देखाउँदै भन्यो, “इः, यहीभित्र छ । अघि भरखर मैले देखेको, चारपाँच वटा छ ।”
यतिन्जेल भागिरामको हातमा उसकी स्वास्नी किन्कीले फरुवा थमाइदिइसकेकी थिई । यो फरुवा उसले हिजो मात्र बाँसगढीबाट किनेर ल्याएको थियो । ‘किनेको पनि कामै लागेछ,’ भागिरामले मनमनै प्रसन्नता व्यक्त ग-यो । र, यताउता केही नहेरी ब्वाङ्ङ फरुवा चलाइहाल्यो ।
त्यसपछि भागिरामलाई थकाइ लागेन । उसले लगातार भ्वाङमाथि फरुवा चलाइरह्यो । सानोतिनो खाल्डो तयार हुँदै गयो ।
“कत्रो गहिरो दुलो बनाएको रै’छ !” किन्कीले डेहरीमा अडेस लागेर भागिरामतिर हेर्दै भनी ।
“यो के गहिरो ? कत्रोकत्रो गहिरो दुलोबाट मुसा झिकेको छु मैले !” भागिरामले आफ्नै वीरताको बखान ग-यो । किन्की पनि सन्तुष्ट भई । कस्तो बहादुर लोग्ने पाएकी छु भने घमन्ड जस्तो भाव उसको अनुहारमा देखा प-यो । लछानु पनि दङ्ग पर्दै थियो ।
लछानुको हात पनि सकसकायो । अनि उसले नजिकै रहेको सानो कुटो टिप्यो र बाउले पारेको खाल्डोलाई अझ ठूलो पार्न थाल्यो । किन्की पनि लोग्नेलाई सघाउने विचारले आई र उसले पनि माटो पन्छाउन थाली ।
खाल्डो बिस्तारै ठूलो, झन् ठूलो हुँदै जान थाल्यो । भागिराम, लछानु र किन्कीको उत्साहमा कुनै कमी आएको थिएन । एक पटक एउटा मुसाले पुलुक्क टाउको झिकेर बाहिर हेर्न मात्र के खोजेको थियो, भागिरामले पूरा फुर्तीसाथ त्यसलाई समाइछाड्यो । भुइँमा बजारेर मुसालाई एक झट्कामै शिथिल पारिदियो । लछानु खुसीले उफ्रियो र मरेको मुसो खेलाउन थाल्यो ।
दुलो गहिरो त थियो नै, साथै तेर्सोतेर्सो परेर निकै टाढासम्म लम्बिएको पनि थियो । तर दुलो जताजता जाँदै थियो, भागिराम त्यतैत्यतै खन्दै थियो । खन्दाखन्दै दुलो त बुकुराबाहिरसम्म पुगेको देखियो । त्यसैले भागिरामले दुई चार पटक फरुवालाई तेर्सो पारेर भित्ताको जगतिर जोडजोडले हिर्कायो । ब्वाङब्वाङ दुलो प-यो । वर्षौंदेखि हुरीबतास, पानी, असिना झेल्दै आएको माटाको भित्तो गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो ।
त्यसपछि भागिरामलाई खन्न झन् सजिलो भयो । उसले न्वारानदेखिको बल झिकेर खन्न थाल्यो । यतिकैमा एउटा डाङ्ग्रे मुसो फुत्त निस्कियो । घरभित्र यताउता गर्न थाल्यो । भागिराम फरुवा उचाल्दै त्यसको पछाडि लाग्यो । निकै बेरको लखेटालखेटपछि मुसो नै लखतरान प-यो र आत्मसमर्पणको भावमा चुलोमा गएर टुसुक्क बस्यो । भागिरामले टाढैबाट फरुवा चुलोतिर जोडले फ्याल्यो । चुलो भत्कियो । अनि चुलोमाथि रहेको डाङ्ग्रे मुसो पनि ठहरै भयो । मरेको यो मुसा चाहिँ किन्कीले खेलाउन थाली ।
भागिरामको घरमा चहलपहल थियो । किन्की र लछानुको अनुहारमा प्रशस्त खुसी थियो । त्यसैले भागिरामका घर छेउछाउका दुईचार जना अरू पनि के भएछ भन्दै भागिरामको आँगनमा झुम्मिए । मुसो समात्ने मेसो देखेपछि तिनीहरूले पनि भागिरामलाई सघाउने विचारले आ–आफ्नो फरुवा लिएर आए र भकाभक खन्न थाले ।
एउटा मुसो फेरि फुत्त बाहिर निस्क्यो र भित्ता हुँदै छानातिर लाग्यो । भागिरामले ठूलो ढुङ्गा टिपेर छानातिर हिर्कायो । छानामा ठूलै भ्वाङ प-यो । मुसो भुइँमा भ्यात्त झ-यो । झर्नु मात्र के थियो, लछानुले च्याप्प समातिहाल्यो ।
“यो त एक पाउको होला जस्तो छ !” किन्कीले छोराको हातको मुसालाई आफ्नो हातमा लिएर यसो जोखेझैँ गरी ।
“यति मात्र हो र ! अझ कति छ ।” लछानुको कुराले भागिरामहरूलाई थप उत्साह प्रदान ग-यो ।
“इः, यहाँ पनि दुलो रै’छ,” किन्कीले अर्को दुलो पनि देखाई । भागिरामले आफूलाई सघाउन आएको फत्तुलाई त्यो दुलो खन्न लगायो । फत्तु पनि त्यही दुलातिर भिड्न थाल्यो ।
एउटा मुसो फेरि अतालिँदै निस्क्यो । डेहरीमाथि उक्लियो । फत्तुसँग आएको लौटनले आफ्नो फरूवाले डेहरीमा प्रहार ग-यो । डेहरी बाङबुङ ढल्यो र मुसो पनि चित भयो ।
खन्ने, हिर्काउने, समाउने क्रम साँझसम्म चलिरह्यो । साँझसम्म अरू छिमेकीहरू पनि थपिए । सबै आएर भकाभक फरुवा चलाउँदै मुसा समात्ने काममा भागिरामलाई सघाउन थाले । छिमेकीको सहयोगप्रति किन्कीको अनुहारमा कृतज्ञताको भाव थियो । सहयोगीहरूका अनुहारमा आज अलिकति भए पनि मुसाको चटनी खान पाइने भयो भन्ने खुसी थियो ।
अन्ततः आठदश वटा मुसा फेला परे । जम्मै जोख्दा आधा किलोजति भयो होला । भागिराम आफ्नो परिश्रम सफल भएकामा दङ्ग थियो । किन्की पनि खुसीले भुइँमा न भाँडामा भएकी थिई ।
राति मुसाको चटनी तयार भयो । सबै जना यतिन्जेल आँगनमै थिए । भागिरामका छिमेकीहरू आ–आफ्नो घरबाट थालभरि भात लिएर भागिरामको आँगनमै आए र किन्कीले दिएको चटनीसँग गमागम खान थाले । भागिरामलाई पनि करङ्गीको भात अघिपछिको भन्दा स्वादिष्ठ लाग्यो । लछानु हात चाटीचाटी खाइरहेको थियो । किन्की पनि भातको डल्ला चटनीमा चोबल्दै ग्वामग्वाम खाँदै दिई । भागिरामको आँगनमा भोज भइरहेको देखिन्थ्यो ।
सबै डकार्दै आ–आफ्नो घरतिर लागे । भागिराम, लछानु र किन्कीले पनि लामोलामो डकार लिए । लछानुलाई भातको नशाले छोप्यो । उसलाई निद्रा लाग्न थाल्यो ।
“निद्रा लाग्यो । सुत्न जाऊँ ?” लछानुले भनेपछि किन्की अतालिई । भागिराम एक्कासि चिन्तित भयो । दुवैलाई बल्ल होस आए जस्तो भयो ।
अनि किन्की र भागिरामले आफ्नो बुकुरातिर हेरे । तर त्यहाँ बुकुरो कहाँ थियो र ? मुसा खोज्ने क्रममा बुकुराका भित्ताहरू ढलिसकेका थिए । छानो खसिसकेको थियो । डेहरी भत्केर धान भुइँमा छ्यालब्याल भइसकेको थियो । चुलो भत्किसकेको थियो । गाग्रीहरू फुटिसकेका थिए । सारा गृहस्थी लथालिङ्ग भइसकेको थियो ।
भागिराम र किन्की भुइँमा थचक्क बसे । टाउकामा हात राखे । लामो सुस्केरा हाले । ‘यो के भयो ?’ दुवैको अनुहारमा प्रश्नभाव मात्र बाँकी रह्यो ।
“जाऔँ, छिमेकीका घरमा गएर बास मागौँ,” भागिराम लाचार भएर उठ्यो । किन्की निदाइसकेको लछानुलाई बोकेर लोग्नेको पछिपछि छिमेकीका घरतिर लागी ।
तर छिमेकीहरू पनि आफ्नो घरमा फरुवा चलाउँदै थिए, मुसा समात्न । उनीहरूका घरका भित्ताहरू पनि ढल्दै थिए । किन्की र भागिराम पुग्दा तिनीहरूका बुकुरा पनि ढलिसकेका थिए ।
२ मंसिर २०७१, मंगलवार २३:०६ मा प्रकाशित
संकटको घडीमा अभिभावकको क्षमता र हैसियत स्पष्ट हुन्छ : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह	७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:३६